Nitohy ny Asa Fitoriana tao Amin’ny Repoblika Dominikanina | Diary 2015
Mbola nanohy an’ilay asa ny misionera, fa niafinafina
Mafy ny nahazo an’ireo rahalahy rehefa voarara ny asa. Hoy i Alma Parson, misionera: ‘Nakatona ny Efitrano Fanjakana, ary voarara ny asa. Tena voasedra sy niaritra fijaliana maro ireo mpiara-manompo malalanay.’ Nisy koa ireo very asa sy nogadraina. Faly erỳ anefa i Alma nilaza hoe: ‘Imbetsaka i Jehovah no hitanay nitantana sy niaro anay.’ Nanohy an’ilay asa foana ireo Vavolombelona, saingy niafinafina. Natoky mantsy izy ireo fa hitantana azy i Jehovah.
Tsy navela handamina fivoriana intsony ny fiangonana. Hoy i Lennart Johnson: ‘Nivory tany an-tranon’olona izahay. Natao vitsivitsy ny mpivory sady niafinafina. Natao kopia tamin’ny milina tsotsotra ny lahatsoratra tao amin’ny Tilikambo Fiambenana, dia iny no nianarana. Tena faly ny Vavolombelona tsy nivadika rehetra, satria ireny fiaraha-mianatra ireny no nahazoanay fampaherezana avy tamin’i Jehovah.’
Roy sy Juanita Brandt, anisan’ireo nijanona teto nandritra ny fandrarana
Vao mainka nanara-maso sy nanenjika an’ireo Vavolombelona ny fanjakana. Tsy nampihontsina azy ireo anefa izany. Hoy ny Minisitra Hungría, tao amin’ilay taratasy ho an’ny Filoham-pirenena tamin’ny 15 Septambra 1950: “Efa nampanantsoina imbetsaka tatỳ amin’ny biraoko Atoa Lee Brandt sy ny mpitarika hafa ao amin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Efa notenenina ry zareo hoe tokony hajanona ny fampielezan-kevitra rehetra momba an’io fikambanana io, satria voarara izany eto amin’ity Repoblika ity. Hoatran’ny tsy raharahain’izy ireo anefa ilay baiko. Mahazo tatitra avy any amin’ny faritra samihafa izahay isan’andro hoe mbola manao fampielezan-kevitra ry zareo fa miafina. Ataony tsinontsinona mihitsy ny fanapahan-kevitry ny fitondrana.” Izao no namaranany ny taratasiny: ‘Aleo roahina ireo Vavolombelona vahiny, satria ireo no tena mpitarika.’
Fanapahan-kevitra “tena nampahery”
Tonga teto ny Rahalahy Knorr sy Henschel tamin’ny faramparan’ny taona 1950. Nafindra tany Arzantina sy Goatemalà ary Porto Rico ny misionera sasany taorian’izay. Ny misionera hafa indray nahita asa fivelomana, ka afaka nijanona teto. Ny Rahalahy Brandt, ohatra, niasa tamin’ny orinasa mpamokatra herinaratra, fa ny hafa indray lasa mpampianatra teny anglisy. Hoy ny Diary 1951 momba azy ireo: “Ny nahita azy ireo nijanona tao amin’ilay tany no tena nampahery an’ireo mpanara-dia an’ny Tompo. Tsy mba nandositra mantsy izy ireo fa be herim-po, ka tsy niala tamin’ilay asa. Ry zareo rahateo no nampianatra an’ireo olona ireo ny fahamarinana.”
‘Ny nahita azy ireo nijanona teto no tena nampahery’ an’ireo tsy nivadika
Anisan’ireo lasa mpampianatra teny anglisy i Dorothy Lawrence. Nampianariny Baiboly koa anefa ny olona liana, ka maro no lasa Vavolombelona.
Nitady hevitra hanompoana foana ireo mpanompon’i Jehovah tsy nivadika, na dia natao andry maso aza. Nendahiny tamin’ny fonony ny boky indraindray, ka pejy vitsivitsy fotsiny no nasitriny tany am-paosy na nataony tao anaty harona nentiny niantsena. Afaka nitory izy ireo tamin’izay, nefa tsy nisarika mason’olona. Nataony toy ny lisitry ny entana hovidina eny an-tsena ny tatitra momba ny fanompoana. Papay, tsaramaso, atody, laisoa, ary epinara, no natao solon’ny boky, bokikely, gazety, fiverenana mitsidika, ary ora. Nantsoina hoe yuca, na mangahazo, ny lahatsoratra tao amin’ny Tilikambo Fiambenana.
“Lisitry ny entana hovidina eny an-tsena”
Lechosas (papay) = boky
Frijoles (tsaramaso) = bokikely
Huevos (atody) = gazety
Repollos (laisoa) = fiverenana mitsidika
Espinacas (epinara) = ora
Mitohy ny asa fanaovana mpianatra
Nanao fifanarahana tamin’i Vatikana i Rafael Trujillo, tamin’ny 16 Jona 1954, ka lasa nahazo tombontsoa manokana teto ny mpitondra fivavahana katolika. Efa voarara efa-taona teo ho eo ny asan’ny Vavolombelona tamin’izany. Mbola nisy 478 ihany anefa ny mpitory tamin’ny 1955. Ahoana no nahatonga an’izany tao anatin’ireny fotoan-tsarotra ireny? Hoy ny Diary 1956: ‘Nanome hery azy ireo ny fanahin’i Jehovah. Niray saina ireo rahalahy sady nanana finoana matanjaka. Be herim-po izy ireo ka nanohy an’ilay asa foana.’
Nandefa taratasy tany amin’i Trujillo ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah, tamin’ny Jolay 1955. Nohazavaina tao tamin’ny an-tsipiriany ny antony mahatonga ny Vavolombelon’i Jehovah tsy hanao raharaha miaramila, ary niangaviana i Trujillo mba ‘hanafoana ny fandrarana ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah sy ny Fikambanana Tilikambo Fiambenana.’ Inona no vokatr’izany?